Noah Lyles: ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Sprinter အကြောင်းသိထားရမည့်အရာငါးခု | Yongguang
Noah Lyles: ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Sprinter အကြောင်းသိထားရမည့်အရာငါးခု
Spotify ရှိ“ Noah Lyles” ကိုရှာပြီးအမေရိကန် Sprinter ၏စကားပြောများပြားသောတေးဂီတကိုရှာပါ၊ သူသည် Nojo18 ကိုကျော်တက်ပြီးသူ၏မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာရှင်ဘဝနှင့် Instagram ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ချန်ပီယံ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရီယိုသည် ၂၀၁၆ ရီယိုအသင်းအတွက်အမေရိကန်အသင်းကိုလက်လွှတ်လိုက်ချိန်တွင်လီဆယ်စ်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်ထိပ်ဆုံးမီတာ ၂၀၀ ပြိုင်ကားမောင်းသူ၊ ၁၀၀ မီတာတွင်တစ်သမတ်တည်းခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အားကစားလောကတွင်အဓိကကျသောနေရာဖြစ်လာခဲ့သည် 4x100m ထပ်ဆင့်လွှင့်မှုတွင်ယူအက်စ်အေ၏နှစ်ရှည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်။
မိမိကိုယ်ပိုင် Instagram ၏ဇီဝရုပ်ပုံတွင်“ artist” နှင့်“ rapper” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သော Lyles - Nojo18 ခေါ်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအရှည်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ Aprilပြီလတွင် A Humans Journey ဟုခေါ်သည်။
"ဒီအယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ခရီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုသင်သိဖို့လိုတယ်" ဟုလီက TeamUSA.org သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့ခရီးဟာပြေးတာမဟုတ်ဘူး။
သူသည်ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်း၌သာမကဂီတပိုင်းတွင်ပါတီထွင်မှုများပြားနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ၂၉၉ ခုနှစ်တွင်သူသည် Olympic ငွေတံဆိပ်အနိုင်ရသောတိုင်စတားမောရစ်သည်ဇူးရစ်မြို့ရှိ Diamond League ဖိုင်နယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်သူတို့၏သီချင်း“ Souvenir” ကိုဖွင့်ပြသည့်အချိန်တွင် Lyles နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ။
Lyles ဟာဂီတရုံနဲ့မရပ်ပါဘူး သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖက်ရှင်လောက၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ရုပ်ပြများ၊ ပန်းချီကားများနှင့် anime များကစိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာအရသူသည် Doha ရှိ 2019 IAAF ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ၌ငွေဆံပင်နှင့်ပြသခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသူအကြိုက်ဆုံး anime ဇာတ်ကောင်များကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ဆေးဆိုးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သူဟာ Anime ဇာတ်ကောင်တွေကိုတောင်စိတ်ကူးယဉ်မိအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ "ငါကဂျပန်နောက်လိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတော်တော်ကြီးတဲ့ anime ပန်ကာဖြစ်လို့ဒါကိုငါအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြနေတယ်" ဟုသူက NBC Sports ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
နာမည်ကတော့ Lyles, Noah Lyles ပါ။ James Bond Day ⁣⁣ #OMEGAmychoice #JamesBondDay #athletics #fitness #trackandfield #running #sports #handsome #cute # #model #fashion #cool #instagood #boy #blackmen #follow #hair #me #swag #stylish လို
high-caliber အားကစားသမားများနည်းတူ Lyles အားကစားမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏မိဘများဖြစ်သော Keisha Caine နှင့် Kevin Lyles တို့သည် Seton Hall တက္ကသိုလ်မှအားကစားလောကတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ Keisha သည် 4x400m ထပ်ဆင့်လွှင့်မှုတွင်ကိုးကြိမ် All-American နှင့်နှစ်ကြိမ် NCAA ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးကီဗင်က ၁၉၃၃ နွေရာသီတက္ကသိုလ်တွင် 4x400m ရွှေ၌ရွှေကိုရွှေကိုအမေရိကန်အားကူညီခဲ့သည်။ (ကီဗင်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ၌အမေရိကန်နှင့်အခြားအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး Team USA သည် ၄x၄၀၀ မီတာ၌ရွှေကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။ )
၄ င်းသည်အမေနှင့်အဖေမျှသာမဟုတ်ပါ။ နော younger ၏ညီဖြစ်သူဂျိုစီဖတ်စ်သည် (၄ င်း၏ခန့်မှန်းထားသည်!) 4x400m relay တွင် ၂၀၁၄ အငယ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးယနေ့မီတာ ၂၀၀ နှင့် ၄၀၀ နှစ်ခုလုံးတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဂျိုးဇက်ဖ်ကိုသူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဟုနော calls ခေါ်ခဲ့သည်။ ဂီတနှင့်ပတ်သက်သောအနုပညာလုပ်ငန်းများစွာတွင်အငယ်လေးကိုလည်းဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
တိုကျိုသို့လမ်းစဖြစ်ပါစေ !! ath ⁣⁣⁣ ath ath ath ath ath ath # အားကစားသမား #fitness #trackandfield #running #sports #athlete #training #fit #run #fitnessmotivation #motivation #workout #tracknation #jump #power #muscle #runner #tracknation #usatff iaaf #adidasrunning #adidas # tokyo2020 #Olympics
Lyles သည်မိခင်ဖြစ်သူ Keisha အားကလေးငယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပြင်းထန်တဲ့ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သည့်အပြင်ရဲမှူးအဖြစ်မရပ်တည်ခင်အလယ်တန်းကျောင်းမှစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုခံနိုင်ခဲ့သည်။
“ အသက်ရှူစက် (နှင့်) ကျွန်တော့်အမေတစ်ညလုံးတည်းခိုနေတဲ့အချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကအကောင်းဆုံးအချိန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး” ဟုလီဆယ်လ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “ မင်းကအဲဒါကိုရိုက်နှက်ရမယ်၊ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရမယ်၊ ပြီးတော့ငါ့အမေကိုကူညီပေးတာကပိုကောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ”
သင်ယူမှုအားနည်းချက်များနှင့် dyslexia သည်ကျောင်း၌ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေနှင့်သူ့အတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟု Lyles ကပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်၎င်းသည်ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
“ ငါ့ရဲ့မိခင်ထက်ဘယ်သူမှခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိဘူး၊ တစ်နေ့မှာမင်းလိုပဲငါလိုချင်တယ်ဆိုတာကို (အဲဒါက) တကယ်အားရှိစေတယ်။ မင်းကိုနင့်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပုံကမင်းလိုအမေတစ်ယောက်ရဖို့ငါဘယ်လိုကံကောင်းခဲ့သလဲဆိုတာကိုငါ့စိတ်ထဲလွင့်စင်သွားစေတယ်။
ဒါကြောင့်ငါပြေးရတာ၊ လေ့ကျင့်တာ၊ ပြိုင်ရတာအရမ်းပျော်တာပဲ။ ငါဆရာဝန်များ၏ရုံးခန်းထဲမှာနေထိုင်ခဲ့သည့်အချိန်များရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့တွေကုန်လွန်လို့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ကျွန်ုပ်၏အဖြစ်အပျက်ကို #happythanksgiving အားဝေမျှခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Beijing 2008, London 2012 နှင့် Rio 2016 တို့တွင် GOAT Usain Bolt ကအဓိကအားကစားသမားများပြေးဆွဲသည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူအားကစားရုတ်တရက်ဖြည့်ရန်ကွာဟချက်တစ်ခုနှင့်“ ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးလူသား” ခေါင်းစဉ်သည်ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
"ရည်မှန်းချက်ကရွှေ ၁၀၀ နဲ့ ၂၀၀ နှစ်ခုလုံးမှာရွှေကိုရဖို့ပါ" ဟု ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တိုကျို ၂၀၂၀ ကို ကိုးကား၍ လီးလ်က NBC Sports သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကအပြုံးဖြင့်ဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ Usain Bolt အကြောင်းပြောရင်၊ သူကကျွန်တော့်အရွယ်မှာသူထက်ပိုမြန်တယ်။ ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲကြည့်ရအောင်။ ”
သူသည် Bolt ကဲ့သို့လူကြိုက်များလိုခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိပါသလား ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ၌ ၂၀၀ မီတာအနိုင်ရပြီးနောက်သူသည်ဇာတ်ကောင်အစဉ်အလာကိုရရှိခဲ့သည်။
“ (ငါ) ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်ခြင်း။ ... ငါဟာလူတွေကိုမျှော်လင့်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါအခုရှိနေတဲ့အရာတွေကိုတွန်းအားပေးနေတာထက်ပိုတယ်။ ငါကြည့်ရတာနှစ်သက်တယ်၊ ပျော်တယ်၊ ပျော်တယ်။ ”
post အချိန်: Jul-08-2020